Bahrain: Rà, firaisana ara-nofo sy fanagadrana · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Rà, firaisana ara-nofo sy fanagadrana
Voadika ny 17 Oktobra 2018 6:35 GMT
Eny ary. Mitodika ianao mijery ankehitriny ka andeha hatomboka ny fitetezam-bilaogy amin'ny aingitraingitra sy ny fivoarana avy any:
Toa nolazaina fa vetaveta i Mahmood noho ny fakàna sary sarivazo manao firaisana eo amin'ny iray amin'ireo hazo voanio ary nisafidy hametraka akany ao amin'ny tafon-trano. Nampitandremina izy; na izany aza, mba hiala amin'ity fihariana “biby manao firaisana” ity satria mihevitra ny sasany fa ho voasakan'ny Helodrano manontolo ny tranonkalany noho ny teny ampiasaina ao amin'io lahatsoratra io.
Mihetsika … andro faha-folo amin'ny Muharram, volana voalohany amin'ny alimanaka Miozolomana, hetsika izay nitranga nandritra ny 1.300 taona ary nankalazain'ny mponina Shiita ao Bahrain tahaka ny ataon'ireo Miozolomana Shiita an-jatony tapitrisa manerantany ho fahatsiarovana an'i Imam Hussain.
Ao Bahrain, niova ho hetsika ara-kolotsaina izay tsy fanehoana mahazatra fotsiny ny alahelo izay nasehon'ny filaharamben'ireo lehilahy mikapoka ny tratrany ny fahatsiarovana. Nalefa mivantana tao amin'ny aterineto ankehitriny ireo hetsika ireo, izay nahatonga an'i Tawfiq Al-Rayyash hanolo-kevitra ny hiantso an'ity fetibe ity hoe e-Ashoora.
Na izany aza, nisy nandray ho any amin'ny tendrony io fomba fiteny io tamin'ny alàlan'ny famelana ny fanindromana ny mason-koditra amin'ny loha mba hisian'ny rà betsaka mitete. Ity fandahatsan-drà ity no antsoina hoe “Haidar” ary lohahevitra tena mampiady hevitra na dia eo anivon'ireo mpitondra fivavahana sy Shi'a Marji ‘aza, araka ny nolazain'i wfiq Al-Rayy sy namintinana azy fa tsy manimba ihany ny lazan'ny Shi'a ity fihetsika ity, fa ny finoana silamo amin'ny ankapobeny koa ka mila atsahatra. Zavatra izay saiky iombonan'ny bilaogera Bahrainita hevitraa.
Michael Jackson taorian'ny fialan-tsasatra …
Nandao ny nosy i Michael Jackson! Afa-pahasahiranana, hoy i Mahmood no sady misento, ary nanakoako tany amin'ny hafa. Saingy miala amin'i Jackson mahazatra miditra amin'ilay superstar tsy raharahiana ao Bahrain; Abdulhadi Khalaf mitarika ny saintsika ho any amin'i Salman Zaimana, mpiangaly mozika liam-pandrosoana izay nanana fiantraikany lehibe teo amin'ny zavakanto sy ny mpanakanto ao Bahrain araka ny fanadihadiana lalindalina be tao amin'ny gazetiboky mpivoaka isan'kerinandro Al-Talee'a avy any Koety.
Ny gazety lehibe mpivoka isan'andro ao Bahrain Al-Wasata kosa nanomboka fizarana manasongadina bilaogy sy lahatsoratra bilaogy, telo andro lasa izay. Manahy ny Silly Bahraini Girl ny amin'izay mety hitranga. Milaza izy fa: “Mampatahotra, raha izay no azo hilazana azy, ny fisian'ny media Arabo manara-maso akaiky ny bilaogy. Volana vitsy lasa izay, ohatra, nanome baiko ho an'ireo bilaogera mba hanoratra anarana ny bilaogin'izy ireo any amin'ny minisitera ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao ao Bahrain raha tsy izany mety hiatrika sazy, nisy ny sioka nahita fa misy faniratsirana vaovao mahazo ny gazety an-tserasera. Ary ankehitriny, miezaka manintona ny sain'ireo bilaogera i Al Wasat ary avy eo nikarakara fivoriana tsy ara-potoana mba hiresahana izany ny kabinetra sy ny Parlemanta, ary averiko indray fa hangataka amin'ny ONU isika mba .. mba.. tsy fantatro hoe inona. “
Haitham Sabbah manohy manara-maso ny gazety iraisam-pirenena ary mametraka fanontaniana tena marina mikasika ny safidin'izy ireo tsy hiraharaha vaovao ary miasa amin'izany.
Farany dia naka mpikambana iray tao amin'ny Antenimieran'ny varotra sy ny indostria i Mahmood izay nandefa mailaka am-pahadalana tany aminy, nanentana azy hanao ankivy ny vokatra Danoà ho fanoherana ny Famoahana sariitatra manaratsy navoakan'i Jyllands-Posten momba ny Mpaminany ary milaza fa tokony hametra ny anjara asany ny Antenimieran'ny Varotra mba hikarakara ny fandraharahana sy ny filan'ny fandraharahana, fa tsy ny ara-panahy.
a = amin'ny teny Arabo